Vlamertinge dia tanàna ao amin'ny faritanin'i Vlamertinge, ao amin'ny faritra Vlamertinge, any andrefan'i Frantsa. Ypres, eo amin'ny làlambe N38 mankany Poperinge any amin'ny manodidina.
Ankoatra ny ivon'i Ypres, ny Vlamertinge no tanàna lehibe indrindra ao Ypres. Any avaratrandrefan'i Vlamertinge, eo amin'ny lalana mankany Poperinge, misy toeram-pambolena any Brandhoek.
History[hanova | hanova ny fango]
Ny tahirin-kevitra faramparany momba ny Vlamertinge dia avy amin'ny Moyen Âge. Tamin'ny 857 dia nisy trano fiangonana iray natsangana tao Vlamertinge. Tamin'ny 970 dia rava i Ypres ary nodoran'ny kapitalin'i Vlamertinge. Ny antontan-taratasy tranainy, fantatra hatramin'izao, izay ahitana ny anaran'i Flambertenges, dia ny didin'ny taona 1066. Baudouin van Lille, izay nanisa an'i Flanders, ny vadiny Adela sy ny zanany lahy Baudouin, tao amin'io asa io dia nanome ny entana ho an'ny fiangonana sy ny toko avy amin'i Sint-Pieters ao Lille. Ireo entana ireo dia anisan'ireo zavatra hafa, ny fahafolo ao Elverdinge ary koa ny folo fahafito ao Vlamertinge - "In territorio Furnensi, in villa Elverzenges, decinam unam ; Flambertenges decinam similiter unam ".
Teo ambanin'ny Ancien Régime Vlamertinge dia ny voninahitr'i Veurne-Ambacht sy ny 22 ambiny ary nijaly tamin'ny fahirano an'i Ypres teo akaiky.
Vlamertinge dia 17 metatra ambonin'ny ambony ranomasina. Ny faritr'ora dia ny sisin-tanin'i Ypres any atsinanana, Voormezele any atsimo atsinanan'i Kemmel sy Dikkebus any atsimo, Reningelst any amin'ny faritra Atsimo Andrefana, Poperinge any Andrefana, Elverdinge any Avaratra ary Brielen any amin'ny faritra avaratra atsinanana.
Fampivoarana ara-demôkratika.[hanova | hanova ny fango]
Ny 1487 hatramin'ny 1697 dia mahita ny fihenan'ny mponina Vlamertinge. Ny fanazavana azo tsapain-tanana indrindra ho an'izany dia ny ady lehibe valo taona tany Holandy. Nandritra ny Ady Lehibe Voalohany dia hitantsika fa mitebiteby indray ny mponina. Izany dia satria i Ypres akaiky, izay tanàn-dehibe teo aloha, dia nipoaka mafy ary ny Vlamertinge koa dia niaritra betsaka tamin'ireo daroka baomba ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Vlamertinge&oldid=999373"
Voaova farany tamin'ny 28 Desambra 2020 amin'ny 03:38 ity pejy ity.